Nhau - Maitiro ekunyatso deredza mashandisiro emushini wezai muchina?
Maitiro ekunyatso kudzora mashandisiro emushini wezai muchina muchina?
Maitiro ekunyatso kudzora mutengo weiyo washer muchina. Yedu yekuwachisa zai muchina ine yakasimba robhoti, yakatsiga mashandiro, isina zai kusvetuka, hapana zai kudonha, hupenyu hwakareba hwebasa. Iine yakakosha nylon bhurasho, otomatiki kutapurirana yekutsvaira, iyo inonyatso zadziswa mukushandisa muzai kurodha uye kurongedza, uye yakakwira kugadzirwa kunyatsoita. Saka tingaite sei nemazvo kudzikisa mutengo wekushandisa zai washer?
1. Usati watenga, ita ongororo yemusika inonzwisisika, gadzira chirongwa chekutenga, shanyira, uye sarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakachipa. Deredza mari yekudyara mukusarudza nekutenga michina.
2. Zvinoenderana nezvinodiwa nemagetsi emagetsi, zvazvino, nezvimwewo, chiyero chakafanana chekudyara chinoshandiswa, kwete kutambisa simba risingabatsiri remidziyo, uye kuchengetedza tsvina yemagetsi enzvimbo dzekuwedzera dzemidziyo.
3. Tevedza zvinodiwa panguva yekumisikidza uye kushandisa, deredza kuitika kwekutadza panguva yekumisikidza uye kushandiswa, chengetedza kuchengetedzeka uye kwakajairika mashandiro eazai washer, kuderedza mukana wekugadziriswa kwemidziyo, uye kudzikisa mutengo wekushandisa kwemidziyo.
4. Usati washandisa chishandiso, tarisa kuchengetedzwa kwesimba remagetsi, switch, nezvimwewo, kudzikisira kuitika kwekutadza kwekuchengetedza kunoshandiswa nemidziyo, kuwedzera hupenyu hwebasa remidziyo, uye kudzikisa mari yekushandisa yemidziyo.
5. Gara uchitarisa zvishandiso, wedzera kuziva kwekugadzirisa uye kugadzirisa, shandisa iko kuchengetedzwa kwekushandisa kwemidziyo zvinoenderana nebasa rekushandisa kwemidziyo, uye kudzikisa imwezve mari yekugadzirisa michina uye kugadzirisa.
Muchina wekuwacha mazai unonyanya kupa maturusi ekuchenesa varimi. Izvo hazvidi kugeza akawanda mazai uye mazai edhadha nemaoko zuva rega rega, izvo zvinovandudza mashandiro ebasa uye zvinovimbisa mhando yechigadzirwa chezai. Kuziva nzira dziri pamusoro, tinogona kusevha yakawanda mari.
Egg Kupwanya Muchina Vagadziri, Yakabikwa Zai Kutemesa Muchina, Otomatiki Egg Kuputsa Muchina, Zai kurongedza muchina, Hatching Egg Packer, Egg Kuronga Uye Kurongedza Machine,